काम गर्न सकेनौँ, खुट्टा तानातानमा लाग्यौँ भने पार्टी डुब्छ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेकपा एमालेले प्रदेश नं. १, ३, ४ र ५ तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ र ७ को मुख्यमन्त्री लिने सहमति वाम गठबन्धनमा भइसकेको छ । प्रदेश नं. १ को मुख्यमन्त्रीका दावेदार एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा प्रदेश प्रमुख भीम आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः
निर्वाचनको समिक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
सवैले सवै ठाउँमा स्थान पाउन सम्भव हुँदैन । प्रदेश प्रमुख र स्थायी समितिमा निर्णय गर्ने ठाउँमा भएकाले जो परेन, उसले विभिन्न ठंगले प्रचार गरेको देखियो । तर, पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्यालाई सकेसम्म समाधान गर्ने कोसिस गरियो । प्रदेश नं. १ मा स्थानीय तहमा एमाले एक्लैले बहुमत ल्यायो । प्रदेश सभामा झण्डै ६५ प्रतिशत निर्वाचन जितेका छौँ । प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले राम्रो रिजल्ट दिएका छौँ ।
टिकटको विषयलाई लिएर आलोचना पनि भयो नि ?
एक जनाले स्थानीय निर्वाचनको बेला पैैसा मागेको भन्ने कुरा आयो । मैले थाहा पाएपछि तत्काल त्यस्ता गतिविधि रोक्न सम्बन्धित कमिटीलाई सतर्क रहन निर्देशन दिए । एमालेमा त्यागको मुल्याङकन हुन्छ, कामको मुल्याङकन हुन्छ, जित्न सक्ने क्षमताको मुल्याङकन हुन्छ भन्ने सन्देश हामीले दियौँ । प्रदेश कमिटीका सदस्य, जिल्लाका नेताहरु र जिल्लामा भएका केन्द्रीय नेता बसेर नाम टुंग्याउनुहोस भनेको हुँ । जिल्ला कमिटीहरुलाई जित्ने नेतालाई उम्मेदवार छान्नुहोस, तपाईहरुको निर्णय सदर हुन्छ भनेको थिएँ । विवाद भएर मिल्न नसकेको ठाउँमा मात्र माथिबाट हामीले निर्णय गरेका हौँ । उदयपुर र संखुवासभामा निर्णय गर्न अलि गाह्रो भएको थियो । एउटाले माने, अर्काले नमान्ने स्थिति थियो । त्यसकारण सवैको कुरा सुनेर हामीले माथिबाट निर्णय गरेका हौँ । उदयपुरको विवाद प्रदेश उपप्रमुख शेरधन राईले ‘म मिलाउँछु’ भन्नुभयो । उहाँले दुई दिन लगाएर अगुवा साथीहरुसँगको छलफलको आधारमा टुंग्याउनुभयो । त्यही आधारमा हामीले निर्णय गरेका हौँ ।
आफूले टिकट पाए निश्पक्ष निर्णय भयो भन्ने पाएन भने अनेकथरी कुरा गर्ने गरेको पनि देखियो । ‘मेरो भएन भने आत्महत्या गर्छु’ भनेर पनि एसएमएस गर्नुभएको थियो । आत्महत्या नै गर्न तयार हुने मान्छे के–के गर्न तयार हुँदैन होला ?
अव प्रदेश सरकार बन्दै छ, प्रदेशको विकास कसरी गर्ने योजना छ ?
जहाँसम्म सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने विषय छ, त्यसको लागि हामीले प्लान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मेरै सक्रियतामा एक वर्षदेखि विकास र समृद्धिको गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौँ । गुरुयोजनामा एक वर्षमा के गर्ने, दुई वर्षमा के गर्ने, पाँच वर्षमा के गर्ने, दश वर्षमा के गर्ने, विकासलाई कहाँ पु¥याउन सक्छौँ भन्ने विषय उल्लेख गरेका छौँ । त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
हाम्रा सामू चुनौतीहरु थुप्रै छन् । जनताको अपेक्षा र हाम्रा चुनौतिको बीचमा ठूलो खाडल छ । हामीसँग कानुन छैन् । कर्मचारी छैनन् । बजेट पनि छैन । छिटो काम गर्ने मानिस गएन भने पाँच वर्ष यी झमेलामै अल्झिन्छ । कानुन पास गराउन लामो समय लाग्छ, त्यसैले सुरुमा अद्यादेश ल्याएर काम सुरु गर्ने भनेर साथीहरुलाई जिम्मा दिइसकेको छु । अप्ठ्यारो अवस्थामा वाम गठबन्धनले जितेको छ । ६ वटा प्रदेशमा हामी सरकार बनाउँदैछौँ । हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने पाँच वर्षपछि फेरि जनता कुरेर बस्दैनन् । त्यसकारण हामीले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेछ ।
संसदीय दलको नेता स्थायी समितिले निर्णय गर्छ कि सिधै संसदीय दलले नै छान्छ ?
प्रदेश नं. ५ मा दलले नेता छानिसक्यो । माथिबाट निर्णय गर्दा उसले दलको कमाण्ड समाल्न सकेन भने के हुन्छ ? हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चलेको छ । दल भनेपनि पार्टी नै हो । नेता पार्टीले नै छान्ने हो तर संसदीय दलले छान्छ । संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री हुन्छ । संविधानको व्यवस्थालाई पार्टीले यताउता गर्ने कुरा आउँदैन ।
जात र गुटको आधारमा नेता छानिन्छ कि पार्टीका आधारमा ?
हामी एक सय २५ जाती छौँ । सरकार बनाउँदा समावेशी बनाऔँ, पार्टीमा समावेशी बनाऔँ भन्ने हुन्छ । तर, जातकै आधारमा मात्रै सवै चीज हुँदैन । पार्टी भित्रको लगानी, उसले गरेको योगदान, क्षमता, योग्यता सवै चीज आउँछन् । राजनीतिक स्वार्थ एक ठाउँमा गएर मिल्छ तर यदि जातीय विभाजन भयो भने मिल्न गाह्रो हुन्छ । जातीय राज्यको नारा देशभर चल्दा पनि एमालेले जातीय आधारमा हुँदैन भनेर अडान लिएकै हो । राजनीतिक स्वार्थसँग अनेकौँ चीजलाई जोड्दा उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।
जातीय आधारमा होइन, पार्टीका आधारमा संसदीय दलको नेता छानिन्छ । दोस्रो, मुख्यमन्त्री पक्ष (गुट) को आधारमा भागवण्डा हुँदैन । हामी सवै एमाले हौँ । हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने अर्को पटक पनि सरकार बनाउने स्थानमा हुन्छौँ । काम गर्न सकेनौँ, खुट्टा तानातानमा लाग्यौँ भने पार्टी डुब्छ ।
मैले काम गर्दा गुटगत हिसाले गरेको छैन । गुटका चर्का–चर्का समस्या भएका ठाउँमा पनि हामीले प्रदेश १ मा मत्थर गरेका छौँ । समूह विभाजन त महाधिवेशनमा हुने हो । एउटा महाधिवेशनमा के भयो, अर्को महाधिवेशन के हुन्छ भनेर अहिलेदेखि नै हिसाव किताव गरेर जाने कुरै होइन । त्यो त जिल्ला अधिवेशनमा जिल्लाका साथीहरुले गर्लान, केन्द्रको महाधिवेशनमा केन्द्रमा होला । बाह्रै महिना, चौविसै घण्टा गुटको कुरा गरेर पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन ।
मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै हुनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मान्छेमा महत्वकांक्षा चुलिएको छ । उ पर्खन तयार छैन । गुट आदि इत्यादि पनि आफ्नो टाउको जोगाउन मात्रै भएको जस्तो देखिन्छ । जव आफ्नो मामला आयो, त्यहाँ गुट पनि हुँदैन । सिंगो समाज नै अहिले यस ढंगले अगाडि बढेको छ । निश्चित अवधिसम्म यस्तै हुन्छ । तर, विस्तारै यस्ता समस्या हट्दै जान्छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता परिपक्व ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रदेशमा सर्वसम्मत नेता छानिने सम्भावना छ कि छैन् ?
सकेसम्म सर्वसम्मत नेता छान्ने प्रयत्न गर्छौ । प्रदेश नं. ५ मा सर्वसम्मत भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले सर्वसम्मत हुन सकेन भने निर्वाचनबाट छान्छौँ । सर्वसम्मत हुन सकेन भने आकाशै खस्छ भन्ने ढंगले सोच्नु हुँदैन ।